MUQDISHO: Wado muhiim ah oo loo xiray Gaari looga shakisan yahay waxyaabaha Qarxa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. MUQDISHO: Wado muhiim ah oo loo xiray Gaari looga shakisan yahay waxyaabaha Qarxa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Cidamad Amniga ayaa xiray Wadadda aada garoonka Diyaaradaha Muqdisho, agagaarka Isgoyska KM 4, kadib markii Gaari hakaasi la dhigay looga shakiyey qarax.
Gaariga oo ah nooca NOAH ayaa horyaalla dukaamo ganacsi wadadda dhexdeeda, waxaana ciidamaa amy joojiyeen isku socodka dadka ee jidkaasi oo ah mid muhiim ah oo mashquul badan.
Gaariga oo in muddo ah yaallay halkaasi ayaa laga shakiyey, waxaana la sheega in loogu yeeray ciidamada Miinooyinka qaabilsan.
Previous articleFaahfaahin: Koox Dabley ah oo fal Dil ah ka geysatay magaalada Beledweyne
Next articleWeriye 2 Bil u xirnaa Puntland oo Maxkamad Milateri lasoo taagay iyo Qodobbada lagu eedeeyay